Xoghayaha Dowlada Hoose ee Balcad oo beeniyay in xil ka qaadis lagu sameeyay | Jowhar Somali News Leader
Home WARARKA Xoghayaha Dowlada Hoose ee Balcad oo beeniyay in xil ka qaadis lagu...
Xoghayaha Dowlada Hoose ee Balcad oo beeniyay in xil ka qaadis lagu sameeyay
Xoghayaha Dowlada Hoose ee Degmada balcad Maxamed Xasan Dhacdoy ayaa beeniyay in xilka qaadis lagu sameeyay isagoo diiday inuu wareejiyo xilka uu hayay.
Dhowaan ayaa mid kamid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle waxa uu geeyay degmada Balcad xoghaye cusub oo uu sheegay inay soo magacawday wasaarada arrimaha gudaha dowlad goboledka Hirshabelle.
“Ma jirto qoraal ay ii soo gudbiyeen Maamulka Hirshabelle xildhibaanada, labo xildhibaan ayaan leeyahay waana inay dastuurka fiiriyaan iyagoo is khilafsana xilna ma qaadi karaan.”ayuu yiri xoghayaha dowlada hoose ee Hirshabelle.
Xoghayaha dowlada hoose ee degmada Balcad Maxamed Xasan Dhacdoy ayaa ku eedeeyay guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur inuu ka shaqeynayo iska horkeen uuna dhowaan dad rayid ah ku dhibaateeyay deegaanka Geedfaqay oo ka mid ah degmada Balcad.
Hase yeeshee munaasabad dhowaan lagu qabtay degmada Balcad ayaa lagu shaaciyay in Yuusuf Xasan Cali uu yahay xoghayaha dowlada hoose ee degmada Balcad,balse waxaa weli howsha xoghayaha sii wata Maxamed Xasan Dhacdoy.
Daawo Xoghaya Dowlada Hoose ee degmada Balcad oo ka hadlaya xilka qaadista lagu sameeyay;
Previous articleSheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 64aad
Next articleMaraykanka oo ku hungoobay qaraar uu doonayay in laga soo saaro ururka Xamaas